Best organic Organic 100% Ulusu ukhathalelo Natural ecocekileyo Rose Oil mveliso kunye nabenzi | HaiRui
Umgangatho ophezulu weOrganic 100% yoKhathalelo lweSikhumba oMsulwa weoyile yeRose
Ibhotile, DRUM, Glass Isikhongozelo
Umbala otyheli tyheli ukuya kumbala otyheli ngaphezulu kwama-20 ° c
I-185.00 ° F
Umxhuzulane ocacileyo @ 20 ° c:
Isalathiso sokushicilela @ 20 ° c:
Ujikelezo olubonakalayo @ 20 ° c:
I-16% ye-citronellol kunye ne-33% yegeraniol
I-1000 Kilogram / Iikhilogram ngenyanga
1 Umnatha Wt. ye-50KGS / 180KGS kwi-gallon GI Drums 2 I-logo yomThengi kunye ne-Sticker Design kunye nePrinta 3 ye-Alumiunm Bottle ye-Order encinci qty 1kg, 2kg, 5kg
SHENZHEN / SHANGHAI, ETSHAYINA
Ubungakanani (iikhilogram) 1 - 100 > 100
Est. Ixesha (iintsuku) 8 Kuya kuthethathethwana
I-HaiRui yeoyile yeRose yeNdalo (ioyile yaseRose Otto) i-CAS No. 8007-01-0
Inkangeleko Umbala otyheli tyheli ukuya kumbala otyheli ngaphezulu kwama-20 ° c
Umxhuzulane ocacileyo @ 20 ° c 0.848 ~ 0.880
Isalathiso sokushicilela @ 20 ° c 1.4520 ~ 1.4700
Ujikelezo olubonakalayo @ 20 ° c -5 ° ~ -1.8 °
Ukunyibilika inyibilika kwi-ethanol
Umxholo I-16% ye-citronellol kunye ne-33% yegeraniol
Ioyile yeNdalo yeRose (iRose Otto Oyile) …………………………………………………………………………
I-oyile yaseRose, ethetha ukuba yenyuka i-otto (i-attar ye-rose, i-attar yeeroses), yiyo ioli ebalulekileyo ikhutshwe kwi amagqabi zeentlobo ezahlukeneyo ze wavuka.
Ama-rose ottos akhutshwa ngaphandle ulwelo lwemphungaNgelixa ukufunyanwa kwe-rose kufunyenwe ukukhutshwa kwesinyibilikisi okanye Ukutsalwa kwe-carbon dioxide, ngokusetyenziswa ngokupheleleyo kokungapheliyo iziqholo.
Nokuba ixabiso labo liphezulu kunye nokufika kwe ukudityaniswa kwezinto eziphilayo, I-oyile ye-rose iseyeyona oyile isetyenziswa ngokubanzi kwiziqholo.
Ioyile yaseRose ngokwesiko isetyenziselwa ukuzola kunye nokuphakamisa. Kuyachasana nokuvuvukala, ukupholisa kunye nokuthomalalisa, kwaye ngenxa yoko kuluncedo kwisikhumba esomileyo, esishushu, esidlamkileyo okanye esirhawuzelelayo nakwezinye iimeko ezininzi zokukrala, njenge-conjunctivitis (nangona ibingaba ngamanzi anyukayo endaweni yeoyile esetyenziselwa oku) .
Ukongeza, i-rose ilunge kakhulu ekunqandeni, ukunyanga ii-capillaries ezaphukileyo kunye neentlobo zolusu ezivuthiweyo. Ukupholisa kukaRose kunye neempawu zokuthomalalisa zibalaseleyo ekunyangeni iimeko ezinxulumene noxinzelelo kubantu abadala nasebantwaneni.
I-oyile yaseRose ikwabonakalisiwe ukuba inezinto ezichasene neentsholongwane. Kwisifundo esinye seelebhu i-Damask rose ibonakalise isenzo se-antibacterial ngokuchaseneIintlobo ezili-15 zebhaktiriya.
KwiUfundo luka-2009yamavolontiya asempilweni angama-40, ioyile esetyenzisiweyo eluswini yavelisa impendulo yokuphumla enkulu kuneoyile ye-placebo. Abantu abafumene ioyile ye-rose nabo bancipha kakhulu kwinqanaba lokuphefumla kunye noxinzelelo lwegazi kunabo bafumana i-placebo.
Ngaphambiliisifundo sezilwanyana, epapashwe ngo-2004, inhalation ye-oyile ye-rose yafunyanwa ukunciphisa uxinzelelo kwiqela leempuku.
I-oyile ye-rose esetyenzisiweyo (edityaniswe nezinye ioyile) inokusebenza ekunciphiseni ukubakho exesheni, ngokweUvavanyo luka-2006 lwabafundi ababhinqileyo abangama-67 babafazi. Kolu phononongo, umxube oqulathe ithontsi leroses, amathontsi amabini e-lavender, ithontsi elinye le-clary sage, kunye ne-5 cc yeoyile yealmond yasetyenziswa ngohlobo lokuthanjiswa esiswini.
Iimpawu zokuya exesheni
Kubauphononongo lowama-52 lwabasetyhini abangama-52 lokuyeka ukuya exesheni, Abaphandi banike isiqingatha sabasetyhini kwiimassage zeveki ngeeoyile ezifanelekileyo (kubandakanya i-lavender kunye neoli yejasmine ukongeza iioyile ze-geranium) kunye nesiqingatha kungabikho nyango. Emva kweeveki ezisi-8, abasetyhini abafumene i-massage baxela ukuphucuka okukhulu kwiimpawu zokuyeka ukuya exesheni (njengokukhanya okushushu) kunabo bangakhange babethwe.
Nokuba uyisebenzisela imeko ethile yempilo okanye uyisebenzisa kuba uthanda ukuthanda ukuvusa, ivumba lothando kunye naphakade elinothando, ivukile yenye yeoyile zethu ezixabisekileyo.
1. I-Mini order 20G, 50G, 100G ekhoyo
2. Ixabiso lokhuphiswano kunye nenkonzo esemagqabini emva kokuthengisa
3. Ukubonelelwa kwemveliso
4. Ioyile yeRose yendalo
Izinto zokwenza imveliso: iRose
Ioyile yeOrganic yeOrganic
I-oyile ebalulekileyo yeRose
Ioyile yeRose yoLusu
Ioyile yesiqholo seRose Rose
ioyile ye-walnut edliwayo
Amayeza emveli amaTshayina 100% angelica emsulwa ...
Ixabiso Factory ukutya grade izithambiso geranium esse ...
Pure yeNdalo yeZedoary Turmeric yeoyile ebalulekileyo